कस्तो छ कोरोना संक्रमित अमिताभ बच्चनको अवस्था ?
बलिउड मेगास्टार अमिताभ बच्चन कोरोनाभाइरस संक्रमित पाइएपछि अहिले अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनलाई मुम्बईको नानाभाती अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । शनिबार मात्र उनलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो ।
अभिताभले आफ्नै ट्विटरबाट यो खबर बाहिर ल्याएका थिए । उनले ट्विटरमा लेखेका थिए, ‘मलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको छ । अस्पतालमा लगिएको छ र अस्पतालले अधिकारीहरुलाई जानकारी दिएको छ । परिवारका सदस्यहरुको पनि कोरोनाभाइरस परीक्षण हुने भएको छ ।’
अभिताभले यो खबर सार्वजनिक गरेको केही समयमा नै उनका छोरा तथा अभिनेता अभिषेक बच्चनमा पनि कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको पाइएको छ ।
अभिषेकले पनि ट्विटरबाट यो खबर सार्वजनिक गरेका थिए ।
अब नानाभाती अस्पतालमा उनीहरुको अवस्था कस्तो छ त ?
भारतीय मिडिया इन्डियनएक्सप्रेसडटकममा आएको समाचारअनुसार अभिताभ र अभिषेक दुवैको अवस्था अहिले सामान्य छ । अस्पतालका अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले यो समाचार तयार पारेको छ ।
अमिताभ बच्चनले पछिल्लो पटक गुलाबो सिताबो फिल्ममा आयुष्मान खुरानासँगै काम गरेका थिए । कोरोनाभाइरसका कारण यो सफल्म अमेजन प्राइम भिडियोमा लन्च गरिएको थियो ।
अब अमिताभका तीन फिल्म रिलिजको तयारीमा छन्– चेहेरे, ब्रह्मास्त्र र झुन्ड । बिग बी भनेर पनि चिनिने अमिताभले कौन बनेगा करोडपतिको १२ सिजनका लागि अडिसन पनि सुरु गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति : असार २८, २०७७ आइतबार ९:७:५२,